Amandla we-SMT - Shenzhen PhiliFast Electron Limited
Hlela i-Qty. Kokubili prototyping nokukhiqizwa kwezinto ngobuningi
Amafayela ayadingeka IBill of Materials (BOM), PCB (Gerber Files), Pick- N- Place File (XYRS)
Uhlobo Lomhlangano we-PCB I-SMT (i-surface mount tech), i-THT (ngokusebenzisa i-hole tech), noma i-Mixed.
Uhlobo lwe-PCB Amabhodi aqinile, amabhodi e-Flex namabhodi e-flex-flex
Eminye Imihlangano ukumboza okuhambisanayo, umjovo wepulasitiki, ukwakha isikhunta, amahanisi wezintambo, inhlangano yekhebula, umhlangano webhokisi, njll.
Izingxenye Izingxenye zokwenziwa ezisuka ku-01005, 0201, 0402 kuya phezulu
Izingxenye ezisebenzayo ezivela ku-pitch engu-0.2mm
I-BGA (Ball Grid Array) ngenhla kwe-pitch engu-0.2mm
akukho mingcele yezinye izinto.
Izingxenye Sourcing I-Turnkey (i-STHL inikela ngazo zonke izinto), uhhafu-turnkey noma izingxenye ezinikezwe ikhasimende.
Ama-stencils Laser usike insimbi stencil, noma ngaphandle uzimele. Kumahhala kuma-oda amaningi we-PCBA. (thinta imininingwane)
Izivivinyo Ukuhlolwa kwe-QC okubonakalayo, ukuhlolwa kwe-AOI, ukuhlolwa kwe-X-ray ku-BGA, i-Software burning / IC programming, i-ICT, i-Jig Test, ukuhlolwa okusebenzayo, ukuhlolwa kwe-Aging, i-EMI / ROHS / REACH izivivinyo ngokucela.
Amaphakheji Izikhwama ze-Antistatic, igwebu elijiyile nelithambile, ukuvikelwa kwesikhwama se-bubble, “amakhadibhodi wokuhlukanisa amise okwe-" #, ukuvikelwa kwamakhadibhodi anzima namaphakethe wesisindo esiphansi.
Eminye Imisebenzi Siphinde futhi sinikeze ukuhlangana kwentambo, amahanisi wezintambo, ukwakha isikhunta sensimbi ngomjovo wepulasitiki nokukhiqizwa, izinsizakalo zokwakha ibhokisi.
Izinhlobo zeSolder zombili eziholile nezingaholeli (RoHS Compliant)
Iphakheji Yezinto Samukela izingxenye ku Reels, Sika Tape, Tube & Tray, Izingxenye okuxekethile Bulk.
Ubukhulu beBhodi Be-SMT Ubukhulu bebhodi elincane: 45mm x 45mm (Amabhodi amancane kunalolu sayizi adinga ukufakwa iphaneli, futhi siphakamisa ngaphezu kokungu-100mm * 100mm ukwenza ngcono ukusebenza kahle)
• Usayizi Webhodi Elikhulu: 400mm x 1200mm